Matongerwo eNyika, 29 Gumiguru 2019
Chipiri 29 Gumiguru 2019
Gumiguru 29, 2019
Nzou Dzopera Kufa kuHwange National Park
Rimwe sangano rinorwira kodzero dzemhuka reAdvocates4Earth rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa mhuka nehurumende panguva iyo mhuka dziri kufa nenzara pamwe nekushayikwa kwemvura.
Mari Itsva Yotarisirwa Munyika Mukati meMasvondo Maviri
Bhanga guru renyika, reReserve Bank of Zimbabwe, RBZ, razivisa kuti richadhinda mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga serimwe rematanho ariri kutora mukugadzirisa nyaya yekushomeka kwemari munyika pamwe nekugadzirisa zvinhu mumabhanga nemisika yemari munyika.
Mafuta eDhiziri nePeturu Anokwira Mutengo Zvakare
Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority razivisa nezvekukwira zvakare kwemutengo wemafuta edzimotokari nezvikamu zvinoita gumi nezviviri kubva muzana.
Gumiguru 28, 2019
Vanhu Vokurudzirwa Kuongororwa Chirwere cheGomarara
Sangano reCancer Association of Zimbabwe rinoti kubva kutanga kwemwedzi waGumiguru, vakadzi nevarume vanodarika zana vakange vachiuya mazuva ose kuzoongororwa chirwere chegomarara repazamu pamahofisi avo emuHarare.
Vakuru veKambani yeFSG Vosungiswa neKuzvidza Dare reParamende neNyaya ye"Command Agriculture"
Paramende yeZimbabwe nhasi yanyora magwaro ekusungisa kambani yeFert, Seed, Grain (FSG) nemhosva yekuzvidza dare iri
Kanzuru Yovhara Mvura kweMazuva Matatu muBulawayo
Guta reBulawayo rinoti ratanga kuwedzera kuvharwa kwemvura kubva pamazuva maviri kuenda pamazuva matatu.
Vakawanda Vanoti "Bosso" Ichasimudza Mukombe weChibuku Super Cup
Chikwata cheHighlanders ndicho chave kutarisirwa neveruzhinhi kutora mukombe weChibuku Super Cup wemwaka uno.
Mapurisa Anorambidza Vanotengesera Mumigwagwa Kufora Vachinyunyuta neKushungurudzwa neMapurisa
VaTafadzwa Hilton Tamangani vakashaya vari muhusungwa kuHarare Remand Prison mushure mekusungwa pamwechete nevamwe gumi vanotengesera mumigwagwa vachipomerwa mhosva yekurova mupurisa.
Zimbabwe Council of Churches Inoti Haitsigiri Zvirango Zvakatemerwa Vamwe Vakuru VeZanu-PF
Zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nehurumende yebato reZanu-PF nemusi weChishanu wapfuura, sangano rezvemakereke reZimbabwe Council of Churches, rinoti haritsigiri kana kukurudzira zvezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vemu Zanu-PF nemamwe makambani avane chekuita nawo.
Gumiguru 27, 2019
America Inouraya Mukuru weISIS Abu Bakr Al Baghdadi
Mutungamiri wenyika yeAmerica VaDonald Trump vazivisa nhasi kuti mutungamiri wechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State kana kuti ISIS Abu Bakr al Baghdadi nezuro akaurayiwa nemauto eAmerica eSpecial Operations muSyria nezuro.
Gumiguru 26, 2019
Vagari vekuKariba Vofa neNyota Makumbo Ari Mumvura
Vamwe vagari vekuKariba vanoti vave kufa nenyota makumbo ari mumvura zvichitevera kushaikwa kwemvura yakachena muguta iri iro riri kumahombekombe kwedhamu guru reKariba.
Hurumende Yoshora Kutemerwa Zvirango kweGurukota reVasori VaNcube neAmerica
Hurumende yeAmerica nezuro yakatemerwa zvirango gurukota rezvevasori VaOwen Mudha Ncube zvirango ichivapomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu.